Xiriirkiinu Ma Noqon Karo Cillad La'aan Laakiin Kuwani Waa 7 Calaamadood Oo Muujinaya Inuu Qurux Badan Yahay - Aayaha
Aayaha editorSeptember 2, 2020
Miyuu jiraa xiriir kaamil ah? Hagaag, waxay ku xirantahay qeexitaankaagaa micnaha waxay tahay kaamil ahaantu.
Laakiin waxaa jira wax la yiraahdo xiriir qurux badan oo markaad xiriir qurux badan ku dhex jirto, si uun ayaad u ogaaneysaa.
Kuwani waa qaar ka mid ah astaamahaas lagu garto in xiriirkiinu uu qurux badan yahay:
1. Waxaad jeceshihiin inaad waqti isla qaadataan
Maxaa ka qurux badan inaad waqti la qaadato qofka kugu weyn ee aad jeceshahay? Xiriir kasta oo leh sifooyinkaan isla markaana lamaanaha ay jecelyihiin inay waqti isla qaataan waa xiriir qurux badan.
2. Xitaa markaad fogtahay…
Waxay noqon kartaa inaad kala fogtihiin adiga iyo lamaanahaaga isla markaana aadan heysan fursad aad iskula joogtaan. Jadwallo kala duwan, shaqo iyo masaafo ayaa laga yaabaa inay kaa fogeyso lamaanahaaga laakiin markaad ogolaan weyso inay taasi idin kala xanibto oo labadiinuba aad isku daydaan inaad wada xiriirtaan adinkoo aanan eegin xaaladda jirta, markaa waxaad leedihiin xiriir qurux badan..
Marka labadiinuba midba midka kale uu garab istaago isla markaana uu caawiyo taasi waa astaan muujineysa xiriir qurux badan.
Xiriirku wuxuu qurux badan yahay marka labada lamaane ay yeeshaan rabitaan dhab ah oo ah inay is taageeraan oo ay is garab istaagaan.
Isgaarsiintu waa sheeyga ugu weyn ee go’aamiya xiriirka quruxda badan. Markay isgaarsiintu xoogan tahay, wax walba waxay umuuqdaan inay meel ku dhacayaan, laakiin markii isgaarsiintu ay liidato, xiriirku wuxuu bilaabaa inuu dhibaato la kulmo.
Xiriir aysan laba lamaane ka cabsaneyn in midba midka kale uu wax u sheego waa mid kamid ah xiriirada ugu wanaagsan ee aad heli karto. Marka xiriirku noocaan yahay way sahlan tahay in la dhiso kalsooni, isfaham iyo midnimo. Waa wax qurux badan.
Xiriir ay lamaanuhu qirtaan markay khaldamaan oo ay raalli-gelin ka bixiyaan khaladaadkooda waa xiriir ay nabaddu diyaar tahay. Inaad awoodi weyso inaad qirato qaladkaaga oo aad raaligelin ka bixi weyso khaladka ayaa ah sababta ugu weyn ay maanta u burburaan xiriiro iyo guurar badan.
7. Isku ujeedo
Haddii aad rabto ballan qaad iyo in lamaanahaagu dhexda u xirto guurka ninkaaguna aysan ka go’neyn, xiriirkaas waligiis ma noqonayo mid qurux badan.
Sidaa darteed haddii aad isku hadaf tihiin ninkaaga isagana uu mustaqbal u rabo sidaada oo kale adigana aad ogtahay inaad isku wado tihiin, taas ayaa xiriirkiina ka dhigeysa mid qurux badan.